नेपाल आज | मलेसियन रिंगिटको भाउ बढ्यो, अन्यको अवस्था कस्तो ?
मलेसियन रिंगिटको भाउ बढ्यो, अन्यको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) मलेसियन रिंगिट भाउ बढेको । तर, अन्य सबै विदेशी मुद्राको भाउ भने घटेको छ ।शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११४ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकेको छ । बिहीबार डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ७९पैसा थियो । शुक्रबार साउदी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ५७ पैसा छ । बिहीबार खरिददर ३० रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६१ पैसा थियो ।
कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । हिजो खरिददर ३१ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । आज यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३१ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा थियो ।त्यसैगरी शुक्रबार मलेसियन रिंगिटको भाउ भने केही पैसाले बढेको छ । मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २७ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ । हिजो खरिददर २७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकिएको थियो ।
कुवेती दिनार १ को खरिददर ३ सय ७५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३ सय ७७ रुपैयाँ ३८ पैसा तथा बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०२ रुपैयाँ ४६ पैसा तथा बिक्रीदर ३०४ रुपैयाँ ०५ पैसा तोकिएको छ । बिहीबार कुवेती दिनार १ खरिददर ३ सय ७६ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३ सय ७८ रुपैयाँ १६ पैसा तथा बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०२ रुपैयाँ ८९ पैसा तथा बिक्रीदर ३०४ रुपैयाँ ४८ पैसा थियो । कोरियन वन एकसयको खरिददर १० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १० रपैयाँ १८ पैसा छ । हिजो एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १० रपैयाँ २४ पैसा थियो ।